असार १५ गतेदेखि दैनिक १० हजारको पीसीआर परीक्षण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कता हरायो ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
असार १५ गतेदेखि दैनिक १० हजारको पीसीआर परीक्षण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कता हरायो ? (भिडियो)
काठमाडौं, १९ असार । असार १५ गतेबाट दैनिक १० हजार व्यक्तिको कारोना परीक्षण गरिने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले घोाषणा गर्नुभयो । तर, पीसीआर परीक्षणको संख्या झन् घटेको छ ।
असार १५ गते ७ हजार पीसीआर परीक्षण भएको थियो । असार १६ गते जम्मा ४ हजार ७ सय ११ जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण भएको छ । त्यस लगत्तै दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा कोरोना परीक्षण दैनिक १० हजारका दरले गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, शुक्रबार कोरोना परीक्षण जम्मा ४ हजार ४ सय ८३ मात्र भएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरका प्रयोगशालामा १५ हजारभन्दा बढी पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने नमुना होल्ड भएका छन् । कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिस रिपोर्ट आउँन १ महिना भन्दा बढी लागेको भन्दै क्वारेन्टाइनबाटै भाग्न थालेका छन् ।
दैनिक १५ हजार पीसीसआर परीक्षण हुनुपर्ने बिज्ञ बताउछन् । असार ६ र असार १५ गते बाहेक पीसीआर परीक्षण ६ हजार नाघ्न सकेको छैन ।
देशभरका ३३ वटा प्रयोगशालामा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुरुपको दैनिक पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्नुको बिबिध कारण देखाए पनि परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रयाप्त नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको बिज्ञहरु बताउछन् । ठूला सरकारी अस्पतालमै किटको अभाव छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोभिड १९ टेष्टिङ सम्बन्धि नयाँ निर्देशिका अनुसार लक्षणविहीन व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने उल्लेख छ । सरकार आफैँले नेपालमा भदौ पहिलो हप्तासम्ममा ३० हजारदेखि ४० हजार सङ्क्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
तर, परीक्षणको दायरा र अन्य ब्यबस्था बढाएको छैन । तर कतिले आफु ढुक्क हुनलाई त कतिले बिभिन्न ठाउँमा पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आवश्यक परेर शुल्क तिरेरै परीक्षण गरिरहेका छन् ।